Ukulungiselela | May 2022
Iingcamango ezingama-35 zoMbutho weCloset-Indlela yokuCwangcisa i-Closet yakho
Phuma nendala, kungena entsha. Amanyathelo ambalwa smart anokuwenza wonke umahluko xa ucoca ngaphandle kwaye uququzelela ikhabethe lakho.
Iingcamango ezingama-35 zoMbutho weKhitshi- Uyicwangcisa njani iKhitshi lakho
Enkosi kwezi mveliso zombutho zasekhitshini zikrelekrele, unokuqinisekisa ukuba izinto ozifunayo zihlala zihlala zikhona kwaye zifikeleleka ngokulula.
Nantsi indlela yokuLisonga ngokuchanekileyo iphepha elilungisiweyo
Le vidiyo ikubonisa ukuba ulisonge njani ngokufanelekileyo iphepha elilungisiweyo nge-elastic.
Funda ukuba ungayiququzelela njani i-pantry yakho kwaye uyenze izive iphindwe kabini ngala maqhinga kunye namaqhinga.
Iingcamango zeGumbi loLondolozo lweeGumbi ezingama-25 -Baququzeleli abaPhambili beLondolo
Ufuna abaququzeleli bokuhlamba iimpahla abangamashumi amabini kwikhaya lakho le-ASAP-baya kuyenza lula inkqubo ukuze ungaphinde woyike umsebenzi.
Iindlela ezi-5 ezilungileyo zokuSonga ihempe- Ungayisonga njani ihempe njengoMarie Kondo
Funda ezi ndlela zintlanu zokusonga ihempe ukucoca lo msebenzi uqhelekileyo. Ukusuka kwindlela yokuncanca ukuya kwisitayile seKonMarie, uya kuba yinkosi yokusonga.
Abaququzeleli abangaphantsi kwesinki abangama-17 kwiiNdawo zokuhlambela kunye neKhitshi- Easy Under Sink Ideas
Ukusuka kwiibhasikithi zokugcina kunye nemigqomo efumanekayo yokutsala iidrowa, ezi zinto zilungelelanisiweyo zineendawo zokuhlambela ezingcolileyo kunye nekhabhathi zekhitshi ezigubungelweyo
Iingcamango ezi-25 ezigqibeleleyo zokuGcina izindlu zangasese ngo-2021-UkuGcina igumbi lokuhlambela
Nokuba unendawo yokuhlambela encinci okanye enkulu, unokukhetha ukugcina. Ngaphambili, i-25 yeengcinga zokugcina izinto zokuhlambela eziya kugcina ukungqubana.
Iingcebiso ngombutho wegumbi lokulala -Indlela yokucwangcisa igumbi lakho lokulala
Amagumbi okulala ziindawo ezingcwele apho sifumana ukuvuselelwa ebuthongweni kunye nendawo ethambileyo yokuzibandakanya ngokusondeleyo, kunye nokuphazamiseka kwesi sithuba sinokubuphazamisa ubomi bethu. Jonga iingcebiso zeNdlu entle yokugcina igumbi lakho lokulala licwangciswe kakuhle.
Imibono engama-30 yoLungelelwaniso lwaseKhaya-iiMakeover zoMbutho weNdlu- Indlu entle
Jonga ezi zinto zenziwe ngumbutho ngaphambi nasemva kwemifanekiso ngolwaneliseko olunzulu (kunye nenkuthazo yokucoca intwasahlobo.
Uyifihla njani iPrinta-isisombululo sePrinta yoGcino
Ukuba ufuna ukugcina umshicileli wakho we-clunky ngaphandle kwamehlo, zama enye yala maqhinga okugcina.
Abaququzeleli abali-10 bokuGcina iiPurses kunye neebhegi - Iimbono zoGcino lwePhu
Gcina zonke izipaji zakho ozithandayo, imivumbo kunye neebhegi ezilungelelanisiweyo kwaye ugcine indawo kwigunjana lakho kunye nale mveliso yokugcina izinto, ukusuka kubahluli be-acrylic ukuya kubaququzeleli beminyango.
UkuGcinwa kwamaGumbi okuhlambela angama-21 kunye neMibono yoMbutho-Uyicwangcise njani indawo yokuBala yeGumbi lokuhlambela neLize
Ezi ndawo zigcinwa kwindawo yokuhlambela kunye nemibono yombutho ziya kukhulula indawo enkulu yokulwa kwindawo yakho esele ixinene.
Amaqhinga oGcino lweKhitshi elincinci-Umbutho weKhitshi elincinci
Sebenzisa la maqhinga ukuhlela ikhitshi lakho elincinci kunye nokwenza indawo yokugcina ngakumbi.
Ngubani uMarie Kondo kwaye Yeyiphi indlela yeKonMari? -Dibana neNkwenkwezi 'yokuDibanisa' kwiNetflix
Ukuba umtsha kwihlabathi lombutho, nantsi yonke into oyifunayo kufuneka uyazi uMarie Kondo kunye nokuba yintoni indlela yakhe yeKonMari. Uyingcali yombutho, umbhali othengisa kakhulu, umsunguli weKonMari Media, Inc, kunye nabanye.
Ukuhamba-kwi-Closet yinkcitho yendawo
Kutheni le nto kufuneka sinikezele yonke indawo yamakhaya ethu ukugcina okungafuneki ngokwenene?
Izinto ezi-6 zikaMarie Kondo 'zoBomi obuTshintshisayo boBomi bokuFihla incwadi' wandifundisa
Ukusukela kwinkulumbuso yenkqubo entsha yeNetflix kaMarie Kondo, 'Tidying Up,' i-Intanethi ayiyekanga ukuthetha kwaye yenza meme ngayo kwaye ndiyayiqonda le nto. Ngoku incwadi yakhe ethi, 'Ubomi obuTshintsha uBomi bokuDibanisa,' ibuyile kuluhlu lweNew York Times abathengisi abathengisayo, kufuneka kufundwe ukuba awukabikho. Nantsi yonke into endiyifundileyo.
Iipetroli ezingama-20 eziHlawula iiFowuni ngo-2018
Beka iintambo ezingabonakaliyo kwindawo yazo kunye nezi zikhululo zefowuni ezibukhali kunye nemibono yoyilo ye-DIY.
Uqasha njani uMququzeleli oChongiweyo-Khawufane ucinge ukuba kwenziwe ngabaCwangcisi
Njengoko umququzeleli oqeqeshiweyo uLisa Jacobs esitsho, 'indawo ehleliweyo yingqondo elungelelanisiweyo bubomi obucwangcisiweyo.' Sithetha noJacobs malunga nenkqubo yokuqesha umququzeleli oqeqeshiweyo: into onokuyilindela, ongafanele uyenze, kunye nendlela yokwenza uninzi lwenkonzo enokutshintsha ubomi bakho.
Ibhedi-mbini-Kwenye kunye neCloset - Ngaphantsi koGcino lweBhedi
Ngaphantsi kweli xesha langoku, ibhedi efulelweyo ilele ikhabethe esebenzayo ngokupheleleyo.
benjamin moore ifrench canvas
imibono emincinci yokugcina igumbi lokulala
iintyatyambo ezingezizo ezenzelwe iivasi